Siinta | Sapsa
Markaad ka fikirto dhammaan waxyaabaha ka dhigaya SAP mid gaar ah, wax badan ayaa sabab u ah qayb ahaan ururinta iyo dadaallada iskaa wax u qabso ee SAPSA.
SAPSA waxay ku aruurisaa lacagaha iyada oo loo marayo tabarucaad shaqsiyeed oo canshuur laga jari karo, isbarbar dhiga shaqaalaha, iyo lacag ururiyayaasha dugsiga. Tabaruciddu waa dariiqo muhiim ah oo abaalmarin leh oo wax looga geysto dugsigeenna sidoo kale.
Haddii aad sidaa doorato, waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo aad dhaqaale ugu deeqi karto SAPSA
Lacag ama Jeeg. Jeegaga waa in lagu sameeyaa SAPSA. Sii Jane Novak xafiiska guud ama boosto ugu dir: 2180 Knapp St, St Paul, MN 55108. EIN-kayagu waa 41-1409751. Haddii aad jeceshahay foomka jarista canshuuraha deeqda sadaqada ah, fadlan la xiriir Khasnajiga SAPSA midna waan kula soo baxeynaa.
Toos ugu tabaruca adoo u maraya bogga internetka ee MN.
Dukaameysiga Amazon Smile . Markaad dukaameysato Amazon Smile, halkii aad ka iibsan laheyd Amazon.com, oo aad u magacawdo SAPSA sadaqadaada, Amazon waxay ugu deeqi doontaa qeyb ka mid ah qiimaha wax iibsiga SAPSA (eeg boggooda "Ku saabsan" wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Amazon Smile).
Keen gurigaaga santuuqa dushiisa (wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sanduuqa dushooda, guji halkan) .
Ka hubi boggayaga lacag ururinta ee hadda iyo kuwa soo socda ee lacag ururinta!
Halkan guji si aad ugu tabarucdo! Mahadsanid!
Miyaad ka fikireysaa inaad ku deeqdo SAPSA?
Shirkado badan ayaa bixiya barnaamijka u dhigma deeqda, taas oo labalaabaysa qadarka deeqda. Fadlan waxoogaa waqti ah ka hubi cida aad u shaqayso si aad u ogaato in tabarucaadu u qalmo ciyaar. Ma isweydiineysaa haddii cida aad u shaqayso u dhigma, eeg halkan
Deeqaha waxay ku yimaadaan nooc kasta, yar iyo weyn, waana ku mahadsan nahay deeqsinimada bulshada SAP!
URURKA DUGSIGA DUGSIGA BARNAAMIJKA ST
Dugsiga Hoose ee St. Anthony Park
2180 Wadada Knapp
Aqoonsiga Canshuurta / EIN: 41-1409751
SAP waxay heshaa xoogaa lacag ah oo dheeri ah iyadoo si fudud loo uruurinayo Sanduuqa Sanduuqa. Sannadkii hore dugsigu wuxuu helay in ka badan $ 500. Waxaan ka codsaneynaa asxaabta iyo qoysaska SAP inay uruuriyaan inta badan Sanduuqyada inta u dhexeysa hadda illaa iyo horaantii Maarso 2020.
Ku soo dejiso barnaamijka Box Top ee taleefankaaga. No loo gooyaa looma baahna! https://www.boxtops4education.com/
Fadlan waqti qaado si aad u dhinto sumadaha Box Top (waxay keydisaa tirinta waqti badan)
Halkan guji si aad u aragto liiska waxyaabaha Box Top
Ku rid Sanduuqa Dusha sare ee sanduuqa qurxinta leh (hoolka weyn ee dugsiga)
Haddii aad jeclaan lahayd inaad gacan ka geysato tirinta bilaha Janaayo ama Maarso, fadlan la xiriir Christina at Christina.a.sheu@gmail.com